dd နှင့်အတူ HDD ကိုမြန်နှုန်းတိုင်းတာပါ Linux မှ
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က HDD ၏မြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာရန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်ချန်ထားခဲ့သည် hdparmကောင်းပြီ၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာသင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြမယ်။ dd
1 HD နှင့်ဖတ်ပြီးရေးအမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာပါ
2 ကျွန်ုပ်၏ HDD နှေးလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
၎င်းကိုသိရှိရန် command တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်သူလုပ်မှာကဒေတာများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ရေးရန်ဖြစ်သည် (test လို့ခေါ်သည်)၊ နောက်ဆုံးအလေးချိန်သည် ၁၀၂၄ MB၊ ဆိုလိုသည်မှာ 1024GB နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့်အရာများ (နှင့်အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်အရေးပါသည်) 1024MB နှင့်အချိန်ကိုဖြည့်သောအမြန်နှုန်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
command တစ်ခုပြီးတာနဲ့ terminal တစ်ခုရဲ့ screenshot ပုံကိုကြည့်ပါ။
တွေ့နိုင်တာကဒီ GB ကိုဖြည့်ဖို့ ၉ စက္ကန့်လောက်ကြာတယ်။ ဆိုလိုတာကအမြန်နှုန်းက ၁၁၉ MB / s ... မဆိုးဘူး
ကျွန်ုပ်၏ HDD နှေးလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
သင့်ရဲ့ hard drive နှေးနေလားဆိုတာသိရန်အခြေခံအားဖြင့် 50 MB / s ထက်ပိုသောမည်သည့်အမြန်နှုန်းမဆိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ hard drive သည်မတိုင်းတာလျှင် (သို့) သင်ပိုမိုမြန်ဆန်သော SSD သို့မဟုတ် SSD ကိုလိုချင်လျှင်အထူးဆိုင်များကိုသွားကြည့်ပါ။ hard drives ကိုဝယ်ကြလော့ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက် (သို့) လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးသင်တကယ်လိုအပ်တဲ့ hard drive ကိုသူတို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာပုံမှန် HDD ပါတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ desktop PC က ၇၀ MB / s ပေးတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ SSD တစ်ခု၊ RAID ဖြစ်မယ်၊ လက်ခံနိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းကမတူဘူးလား ????
ဆာဗာတစ်ခုအတွက်သင့်အတွက် hard drive လိုအပ်ပါကသိုလှောင်မှုပမာဏများစွာလိုအပ်သည်မှာမရှင်းလင်းပါက SSD အသုံးပြုခြင်းသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းလိမ့်မည်။ သို့မှသာသင့်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်များပြားစွာဖြင့် HDD နှေးကွေးနေခြင်းသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ SSD hard drives တွေကိုဝယ်ယူ နှင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းဖန်တီးခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » dd နှင့်အတူ HDD ကိုမြန်နှုန်းတိုင်းတာပါ
16384 +0င်မှတ်တမ်းများကိုဖတ်ပါ
16384 +0င်ရေးထားလျက်ရှိ၏မှတ်တမ်းများ
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 30,227 s ကို, 35,5 MB / s ကို
ကျွန်တော့်မှာပြproblemနာရှိနေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက laptop တစ်လုံးကို 5200rpm နဲ့ sata2မှာသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကငါ့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်
သူငယ်ချင်း၊ HDD သည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များဖြစ်ပုံရသည် ... လူအိုလူအို🙁
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော့်လက်ပ်တော့တစ်နှစ်ရှိပြီ။ အင်္ဂါရပ်တွေအားလုံးကအရမ်းစျေးပေါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၅၁ MB / s နှုန်းနဲ့ဖတ်တယ်။
ဆောင်းပါးကောင်း KZKG ^ Gaara၊ HDD အမှား ၈၀% ကျော်သည့်အခါဘာဖြစ်မည်နည်း။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုပြန်လည်ပြုပြင်။ မရနိုင်ပါ၊ HDD နိဂုံးလား။ ခေတ်သစ်နည်းပညာဖြင့် HDD ရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည် IDE 80 GB ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး ၁၀၀ GB နဲ့ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲ။
^ _ ^ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
250GB IDE HDDs များသည်တည်ရှိပြီးရောင်းရန်ရှိပါကဤနေရာတွင်စစ်ဆေးပါ။ http://www.ebay.com/bhp/250gb-ide-hard-drive
အခြားအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုမှာ eBay တွင် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ သင်၏တိုင်းပြည်သို့ပေးပို့ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားမေးတဲ့အခြားအရာအကြောင်း ... ကွန်ပျူတာမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး၊ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိသေးတဲ့အရာတွေပဲရှိတယ်လို့ငါပြောချင်တယ်။ အကယ်၍ HDD တွင်အမှားအယွင်းများ ၈၀% ရှိပါက ၄ င်းတို့ကို HirensBootCD သို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုခုကိုသုံးပြီးပြန်လည်ပြုပြင်သည့်အခါ၌ပင် HDD သည်ဖြေရှင်းမှုပြthanနာများထက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။ သင်သည်အချို့သောဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းသို့မဟုတ်ကဏ္ repair ပြုပြင်ခြင်းပစ္စည်းများကိုပင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ HDD ကပိုကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းတော့အဲဒီလိုလုပ်တာကပြinformationနာတွေအများကြီးရှိတဲ့ HDD ကိုကျတော့ငါ့အချက်အလက်တွေကိုစွန့်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ 😉
KZKG ^ Gaara အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ eBay ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား။ တိုင်းပြည်တစ်ခုစီ၏ဥပဒေများအောက်တွင်မပါ ၀ င်သော၎င်း၏စိတ်ကူးယဉ်စာမျက်နှာ eBay ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား။ သုံးစွဲသူအချို့သည်လိမ်လည်သူများကိုလိမ်လည်သည်ဟုစွပ်စွဲကြသည်။
eBay သည်ကြီးမားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံမကောင်းခြင်းမှရှောင်ရှားရန်လှည့်စားမှုသည်စိတ်ကျေနပ်မှုမြင့်မားသော (၉၅% ထက်ပိုသော) ရောင်းသူများနှင့် BIG ရောင်းအားများမှပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာလူတစ်ယောက်ဆီက ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်အပေးအယူ ၅၀,၀၀၀ ကနေ ၉၈% ကျေနပ်မှုရရှိတဲ့သူ၊ ခင်ဗျား၊ သူနဲ့တွေ့ကြုံမှုမကောင်းဘူးဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။
မင်္ဂလာပါ KZKG ^ Gaara,
သငျသညျဤနှင့်အတူရှုပ်ထွေးငါ့ကိုစွန့်ခွာ!, .... ပထမ ဦး ဆုံးသင်ပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှု၏ 95% ထက်ပိုမိုသောစိတ်ကျေနပ်မှုအတိုင်းအတာနှင့်ရောင်းအား၏ကြီးမားသောသူများထံမှဝယ်ခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်သင်သည်ငါ 98% ရှိသူထံမှထံမှဝယ်ယူလျှင်ငါ့ကိုပြောပြပါစိတ်ကျေနပ်မှုကနေ အပေးအယူပေါင်း ၅၀,၀၀၀ လုပ်ထားတယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မင်းအဲဒါကိုဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ရောင်းသူတစ် ဦး တည်းမှကွဲပြားခြားနားသောကြယ်အမျိုးအစားများနှင့်အဘယ်အရာကိုတွေ့မြင်ရသနည်း၊ အကယ်၍ ရမှတ်သည်ကြယ်များ၌သတ်မှတ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်းဥပမာ - စိမ်းလန်းသောကြယ် ၅ ပွင့် (၉၉%) အပြုသဘောဆောင်၊ အဝါရောင်ကြယ်ပွင့် ၃% (၁၀%) ကြားနေကြယ် ၅ လုံး အနီရောင် (5%) အနုတ်လက္ခဏာ။
ဆိုးကျိုး ၃- ၅ ကမဖြစ်နိုင်တာကိုဆိုလိုတာလား။
ဟုတ်တယ်၊ ရောင်းသူ ၅၀,၀၀၀ ထဲက ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသောကျေနပ်မှုရသူတစ်ယောက်ယောက်ဆီကပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်သင့်မှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့တကယ်ခွဲဖို့ခက်တယ်။
ဥပမာကြည့်ပါ ဒီပစ္စည်းအကယ်၍ သင်သည်ညာဘက်ကိုကြည့်လျှင်ရောင်းသူ ၉၃၆၂ ရောင်းအား၏ ၉၉.၄% ၏လက်ခံမှု% ရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ အမှန်မှာ၊ သူ၏အမည် / nick ကိုနှိပ်ပါကသူ၏အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်သဘောဆန္ဒများကိုပိုမိုအသေးစိတ်မြင်ရလိမ့်မည်။ ကြားနေ, စသည်တို့
အလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းအချက်အလက် KZKG ^ Gaara, သင်ဤပစ္စည်းများကိုတင်ထားသည်။ ရောင်းသူတွင်အနှုတ်လက္ခဏာ ၃၂ ခုနှင့်ကြားနေ ၃၂ ရှိသော်လည်းသူ၌ (၉၃၇၅) အရောင်း (၉၃၇၅) ၏ ၉၉.၄% ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ …ရောင်းသူက ၁၀၀% စိတ်ချရတယ်မဟုတ်လား။
eBay တွင် ၀ ယ်ယူရန်အခြားမေးခွန်းတစ်ခုအတွက်၊ သင်သည်ထိုစာမျက်နှာတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ထို့ကြောင့်အမှာစာကို (eBay) မှဖြစ်စေ၊ ရောင်းသူနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေအရောင်းအဝယ်အခွန်ရှိရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ eBay? အော်ဒါမှာယူဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် - ကျွန်ုပ်သည် IDE ၌ HDD လိုအပ်တယ်၊ ၂၅၀ GB ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး (၁၂၀၊ ၁၀၀ GB) ။ Intel (R) Pentium (R) M 250 မှာပရိုဆက်ဆာကိုလည်းလိုချင်တယ်။
IDE ရှိယခင် HDD ၏အင်္ဂါရပ်များ:
ပုံစံ - ATA SAMSUNG HM100JC
Firmware ၏မူကွဲ - YN100-80
စွမ်းရည် - ၁၀၀ GB
Model: Intel®Pentium® M ပရိုဆက်ဆာ 780
မြန်နှုန်း: 533 MHz
ပရိုဆက်ဆာအခြေပြုကြိမ်နှုန်း: ၂.၂၆ GHz
ထောက်ပံ့ Socket: H-PBGA479, PPGA478
Processor ကိုတံသင်: PGA- 478
comporteus ကိုကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ disk ပေါ်၌ usb နှင့် 40MB / s သို့မတင်ပဲ Sata 1 ဖြစ်ရမယ်၊ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုအရူးလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်သည် porteus 100% ကိုသိုးထဲထည့်ပြီးအစားထိုးလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်တွဲတွင်စမ်းသပ်ပြီးသော partition တစ်ခုမှစမ်းသပ်ခြင်းမှရလဒ်သည်အင်အားကြီးမားသည်။
1073741824 bytes (1.1 GB) ကူးယူ 1.33319 s ကို, 805 MB / s ကိုကူးယူ
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 10,3208 s ကို, 104 MB / s ကို
Krlos kmarillo ဟုသူကပြောသည်
1073741824 bytes (1.1 GB) ကူးယူ, 28.9431 s ကို, 37.1 MB / s ကို
အခြား hard drive တစ်ခုဝယ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။
Krlos Kmarillo ကိုပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဇွန်လ၏အမြန်နှုန်းကို SD သို့ microSD ကဒ်တိုင်းတာရန်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ if နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိပ်စာကိုကဒ်ပေါ်ရှိလိပ်စာသို့ပြောင်းသင့်သလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အကယ်၍ သင် if to ဥပမာကို dev / mmc2 ပြောင်းလိုက်လျှင်သင်လုပ်ချင်တာကကဒ်ထဲကနေ 1GB ကိုဖိုင်တစ်ခုသို့ကူးယူလိုက်ခြင်းဖြင့်မြန်နှုန်းကိုပေးလိမ့်မည်။
ဤသို့ပြုခြင်းနှင့်အတူပြproblemနာကငါမမှားလျှင်, အဆုံး၌, သင်တိုင်းတာလိမ့်မယ်အဘယျသို့ (သင်က HDD ကိုအပေါ်၏နှင့်အတူရေးမယ်လို့ကြောင့်) သင်ကတိုင်းတာလိမ့်မယ်အဘယျသို့အဆုံး၌, ဒေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ် HDD ကိုဖြတ်သန်းမယ်လို့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ... ဒါဟာ စမ်းသပ်မှု (ငါထင်) 100% တရားဝင်
Manjaro Kernel 4.1 နှင့် SSD နှင့်ရလဒ်
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 6,33915 s ကို, 169 MB / s ကို
အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါး KZKG ^ Gaara၊ "gnu / linux" သို့မဟုတ် "linux" (ဒါကြောင့် Xcord မရှိ XD) သည်သိုး၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်သည်၊ ပိုကောင်းသောလှည့်ကွက်များရှိမရှိသိရန်နည်းလမ်းရှိမရှိသင်သိပါသလား။
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 6,89022 s ကို, 156 MB / s ကို
Linux မှ RAM စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာများကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည် (ကျွန်ုပ်ပျင်းရိသည်မှာရေးသားခြင်း haha) ။ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုစိတ်မပူပါနဲ့၊ ကျွန်ုပ်ဒီမှာပြပါလိမ့်မည်😉
ပုံမှန်အရာ ... Taringa မှာသူတို့ဒီမှာထည့်ထားသမျှကိုကော်ပီကူးတယ်။ အဲဒီမှာမူရင်းသုံးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမရှိဘူးထင်တယ် ... ¬_¬
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 16,9916 s ကို, 63,2 MB / s ကို
[payuta @ Manjaro-HP ~] $ dd = = dev / zero = = စမ်းသပ်မှု bs = 64k count = 16k conv = fdatasync လျှင် dd ။
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 3,57703 s ကို, 300 MB / s ကို
[payuta @ Manjaro-HP က ~] $
ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ SSD ဒေတာဖြစ်ပါတယ် !!!!
တစ် ဦး ကပျော်မွေ့🙂
ငါ (သို့) hard drive ၏ဖြစ်ရပ်တွင် "အပြင်" ဘက်၌၎င်း၏ဆလင်ဒါပါသော partition တစ်ခုတွင်ဤ "စမ်းသပ်မှု" ဖိုင်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည်အတူတူမဟုတ်ကြောင်း (ထပ်မံပြောကြားသည်မှာ - rpm] -> အတွင်းပိုင်းတွင်ရှိသည့်အခြားတစ်ခုထက် disk ၏ပိုမိုမြန်သော ~ မြန်နှုန်း ~ MB / s ပိုမို) ။ ဥပမာအားဖြင့် 5400rpm drive ရှိသောလက်တော့ပ်တစ်ခုတွင်
Windoze အတွက် 1st NTFS Partition:
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 22,8917 s ကို, 46,9 MB / s ကို
Windoze-GNU / Linux အတွက်ဒုတိယ NTFS အခန်းကန့်
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 28,6148 s ကို, 37,5 MB / s ကို
GNU / Linux အတွက်အဓိက 4th Partition EXT4:
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 42,1906 s ကို, 25,4 MB / s ကို
ဒီ disk ကို sata1 mode (1.5 Gb / s) နဲ့ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ယာယီသိမ်းထားသောအချိန်ကိုဖတ်ရှုသည်: 3080 MB ကို 2.00 စက္ကန့် = 1541.28 MB / sec
အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ buffered disk ကိုဖတ်: 170 စက္ကန့်အတွင်း 3.03 MB = 56.04 MB / sec
အခြားတစ်ဖက်တွင် usb3 မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပြင်ပ usb2 disk (480Mb / s -> 60MB / s ~ 30MB / s fd)
1073741824 bytes (1,1 GB ကို) ကူးယူ, 37,2769 s ကို, 28,8 MB / s ကို cqd ။
= စမ်းသပ်မှုကဘာလဲ ဒီစမ်းသပ်မှုမှ disk တွင်ကျန်ရှိပါသလား။ ဆိုလိုတာက ... 1 GB သိမ်းထားတဲ့ဖိုင်အချို့ကိုပယ်ဖျက်နိုင်တယ်
အရေးအသားအမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာရန်အတွက် HDD တွင် test ဟုခေါ်သောဖိုင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်၊ စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်သင်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
1073741824 bytes (1,1 GB) ကူးယူ, 2,37306 s ကို, 452 MB / s ကို
David L. ထံပြန်ပို့ပါ။
[root @ Fedora file] # dd = = dev / သုည = စစ်ဆေးမှု bs = 64k count = 256k conv = fdatasync if = ။
262144 +0င်မှတ်တမ်းများကိုဖတ်ပါ
262144 +0င်ရေးထားလျက်ရှိ၏မှတ်တမ်းများ
17179869184 bytes (17 GB) ကူးယူ, 8,61083 s ကို, 2,0 GB ကို / s ကို
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) ကူးယူထားသော, 2.4175 s, 445 MB / s ကို
၈၈ ခု၊ ဟုသူကပြောသည်
download လုပ်ရန်ရရှိနိုင် Atom 1.0